ဒေါက်တာလွဏ်းဆွေ: ယင်းမာပင်မြို့နယ် လယ်မြေပေါ်မှာ အင်အားသုံး ဖယ်ရှားလုို့ ဒေသခံနှင့် ရဲတပ်ရင်း ပဋိပက္ခဖြစ် (ရုပ်သံ)
မြန်မာနိုင်ငံမှာ မြေလွတ်မြေရိုင်းတွေ များစွာရှိတဲ့အထဲကမှ ဘ၀ကို တည်ငြိမ်အေးချမ်းရိုးရှင်းစွာ ဖြတ်သန်းနေထိုင်ကြသူတွေရဲ့ မြေနေရာတွေကိုပဲ အမိန့်၊ အာဏာနဲ့ အနိုင်ယူဗိုလ်ကျနေတာက ရိုးသားမှု ရှိရဲ့လား။ အပေးအယူ လုပ်တာက ငါတို့ဒီလောက်ပဲပေးမယ်။ ဒီလောက်ပဲယူ၊ မယူရင် ဖျက်တယ်ကွ လုပ်လို့ တရားပါ့မလား။ ဒီလို အာဏာရှင်စရိုက်ဟာ တရားဥပဒေ စိုးမိုးမှု သုညအဆင့်ကို ပြသနေတာပါ။ တရားဥပဒေဆိုတာကလဲ ပြည်သူလူထုကို လောက်လောက်လားလား လုံခြုံမှုအကာအကွယ်မပေးနိုင်ပြန်ဘူး။ စိတ်ကုန်စရာပဲ။
ဒါတွေလုပ်ရင် ကြံခိုင်ရေးပါတီ အပေါ် ပြည်သူတွေ အမုန်း
ပွားမှာ သူတို. သိလျက်နဲ. သဲကြီးမဲကြီး စွတ် လုပ်နေတာ
ဟာ ( ၂၀၁၅ ) မှာ အခြေအနေ မကောင်း ဘူးဆိုပြီး
မထူး ဇါတ်ခင်းတာလား ?
( ၂၀၁၅ ) Election ကြီးဘဲ ပျက်အောင် လုပ်ဖို.ရည်ရွယ်
ဒါမှ မဟုတ် " အုပ်ချုပ်တာတဖွဲ. ၊ သူတို.ကိုအာဏာလွှမ်း
မိုးတဲ. လုပ်ချင်ရာလုပ် ကတဖွဲ. " များလား ?
... အဲဒီ ၃ မျိုးလုံး နိုင်ငံနဲ.ပြည်သူတွေအတွက် ဘယ်ဟာ
မှမကောင်း လို. ၂၀၁၅ ဆိုတဲ. အနာဂါတ် ဟာ စိုးရိမ်စရာဘဲ ။
******** ရင်လေးစရာတွေပါလား ......... ။
ဘယ်ခေတ် ကမှပြည်သူတွေ အပေါ် ဒီလောက် မရက်စက်ခဲ. ဘူး ၊
..... .. ..... မကြုံဖူး ပါ ဘူး ။*****